नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अंग म सँग छैन : सरस्वती लामा ! -
Home मनोरन्जन नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अंग म सँग छैन : सरस्वती लामा !
धुलिखेल । सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड गाउँपालिकामा जन्मिहुर्की यही हावापानीमा बाल्यकाल बिताएकी, गाउँमा घाँस, दाउरा, मेला-पात, हाट-बजार गरी बाल्यकालको केहि समय सोलुखुम्बुमै बिताएपछी काठमाडौ छिरेर सगित क्षेत्रमा जमेकी नेपाली गीत-संगीतको क्षेत्रमा सफल रक गायिका हुन् सरस्वती लामा ।
छोटो समयमै धेरै नेपाली र विदेशिहरु समेतको फेवरेट बनेकी सरस्वती लामा एक समाजसेवी पनि हुन् । केहि सामाजिक संघ-संथामा समेत आवद्द उनको ३ दर्जन भन्दा धेरै गीतहरु रेकर्ड भईसकेको छ ।
उनको पहिलो गिति एल्वम उत्तर-पुर्व हो त्यहि एल्वमको उडिजाने गित वाट दर्शकले उनलाई रक गायिकाको ट्याग दिएका हुन । दोस्रो “उर्वसी” नामक गीति एल्बम पनि बजारमा आईसकेको छ। उनको उर्वसी को शिर्ष गित उर्वसी नै हिट भएको छ। Sorce : bethanchokkhabar
यो पनि १६ बर्षे उमेरकाे पहिलाे अननुभव – जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो ।
बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यस माथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको थियो । त्यो उधुम गर्र्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन ।
भातपकाई (भाँडाकुटी) बाट शुरु हुने हाम्रो बालखेल संधै लोग्ने स्वास्नी भएर लोग्ने स्वास्नीको भुमिका निर्वाह गर्दै बच्चा जन्मिउञ्जेल सम्म खेल्ने गथ्र्यौं । सानोमा यस्ता सबै खेल खेल्न सिकाउने मेरो नायक आज कसरी यति धेरै सोझो भयो ? मनभरी बिकाशलाई बोकेर म एकसुरमा हिंड्दै गर्दा विकाशकै आवाजले म झस्किएं -’ ए– सानी , तिम्रो बाख्राहरु यहाँ ल्याईदिएको छु , पानी पनि ख्वाईदिएं है ।
‘ म बाल्यकालको स्मृतीमा हराईरहेकोले होला एकपटक त विकाशले ए..सानी खेल्न आउ न भनेको जस्तो लाग्यो तर यथार्थमा विकाशले भनेको मैले बुझिहालें । गाउँ देखि निक्कै पर हम्मेसि मान्छेहरु आईनपुग्ने स्थानमा उसकै खेतको बिचमा भएको घना बाँसघारीको सिँयालमा उसका अनि मेरा पनि बाख्राहरु सारेर किताब पढ्दै बसिरहेको थियो विकाश ।
ढुंगो खोज्दा देउता मिल्यो भन्दै म उ भएनेर गएं । उ किताबमै मस्त थियो । बाल्टीको पानीले खुट्टामा लागेको धुलो पखाल्दै बोल्ने बहाना झिकें, कति पढ्छौ विकाश ? अल्छि लाग्दैन ? ‘ ‘ लाग्दैन है । ‘ किताबबाट नजर नहटाई सोझो जवाफ दियो उसले । ‘उफ कति साह्रो गर्मी ।